२०७६ मङ्सिर १५ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
प्रमोद यादव, पंचगावाँ, १४ मङ्सिर/ सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–५ मा शनिवार उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको छ । कुल २६०२ मतदातामध्ये २१२८ जनाले मतदान गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाश खरेलले बताए । पुरूष १२११ र महिला ९१७ जनाले मतदान गरेको खरेलले जानकारी गराए । बिहान ७ देखि शुरू भएको मतदान साँझ ५ बजे सम्पन्न भएको थियो । पर्सा जिल्लामा एक स्थान सखुवाप्रसौनी गापा–५ मा वडाध्यक्ष पदको लागि मतदान भएकोले उम्मेदवारी दिएका पार्टीका सबै नेताहरूको सहभागिता थियो । वडाध्यक्षको लागि पाँचजना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा र एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । समाजवादी पार्टीबाट रूपलाल यादव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट उदयशङ्कर रौनियार, नेपाली काङ्ग्रेसबाट अशेश्वर यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सदरीमहरा चमार र स्वतन्त्र गोपालसाह कानु चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट २०७४
रौतहटको नौ स्थानमा गढीमाई मेला
प्रस, गरुडा, १४ मङ्सिर/ रौतहटको विभिन्न नौ स्थानमा आइतवारदेखि गढीमाई मेला लाग्दैछ । रौतहटको गढीमाई नपाको सुन्दरपुर, हर्दिया, बलुवा र मदनपुरमा गरी तीन स्थानमा, गरुडा नपाको गेडहीगुठी र गम्हरिया दुई स्थानमा साथै कटहरिया नपाको दुधियाभार, गुजरा नपाको कनकपुर, वृन्दावन नपाको आँकडपाथर र माधवनारायण नपाको माधोपुरसमेत जम्मा नौ स्थानमा आइतवारदेखि तीन दिवसीय गढीमाई मेला लाग्दैछ । जिल्लाको नौ स्थानमा गढीमाईको पूजा तथा मेला हुने भएपनि सबैभन्दा ठूलो मेला सुन्दरपुरमा लाग्दैछ । सुन्दरपुरमा यो वर्ष छैटौं मेला भएको स्थानीयले बताएका छन् । भव्य मन्दिर निर्माण गरी अन्य सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएको मेलामा कम्तीमा पाँच लाख श्रद्धालु भक्तजन आउने गढीमाई नपाका मेयर श्यामप्रसाद यादवले बताएका छन् । गढीमाई मेलाको कारण जिल्लाका अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले केही दिन सार्वजनिक बिदा दिइसकेका छन् ।
मरिच र मानिस पक्राउ
प्रस, परवानीपुर, १४ मङ्सिर/ पर्सा प्रहरीले तस्करी गर्न लागिएको अवस्थामा हिजो राति एक ट्याक्टर मरिच र एकजना मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका वडा नं ५ भिस्वा बजारबाट सीमा कटाउन लागिएको अवस्था मरिचसहितको ट्याक्टर र मरिच तस्कर एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौरले जानकारी गराए ।
निर्मल–ठोरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा बस्नेत
प्रस, ठोरी, १४ मङ्सिर/ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्सामा रहेको एकमात्र निर्मल–ठोरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा ठोरी–३ बुद्धनगरका बालकुमार बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । शनिवार ठोरी–२ गौतमनगमा उपभोक्ता समितिको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा बस्नेत अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । समितिको उपाध्यक्ष राजबहादुर मगर, सचिव नानीराम भुँजेल र कोषाध्यक्षमा विनोद चापागाईंलगायत सदस्यहरू सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचित समितिले चारजना महिला सदस्य मनोनीत गर्ने प्रावधान रहेको निर्मल–ठोरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका निवर्तमान सदस्य शम्भु खड्का बताए । ९ सदस्यीय निर्वाचित सदस्यमा नेकपानिकट ७ सदस्य विजयी भएका छन् । उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी चयनअघि समिति अन्तर्गत रहेका ९ वटा एकाइमा सदस्य चयनका लागि निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनबाट एकाइ १ मा राजबहादुर मगर, २ मा कृष्ण कुँवर, ३ मा विनोद चापागाईं, ४ मा यादवराज कुँवर, ५ मा ताराप्रसाद पराजुली, ६ मा बिन्दा पन्त चयन भएका थिए । त्यसैगरी, साबिक निर्मलबस्ती गाविस अन्तर्गत पर्ने एकाइ ७ मा नानीराम भुँजेल सर्व
दुई महिलासहित ५२ जनाद्वारा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/ गण्डक युथ क्लबको आयोजनामा शनिवार सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा २ जना महिलासहित ५२ जनाले रक्तदान गरेको रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्राविधिक धीरेन्द्र झाले बताए । बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाको गण्डक नौतनमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुमन पोखरेलले रक्तदान गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रतिमा गुप्ता, दीपाकुमारी साह, श्याम साह, सन्तोष झा, राकेश गुप्ता, सत्यम सिंह, दीपेन्द्र साह तेलीलगायतले रक्तदान गरेको ब्लोदान पर्साका सहसचिव उमेश गुप्ताले बताए ।
सामूहिक बेलविवाह शुरू
प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/ माईस्थान ईही समितिको आयोजनामा शनिवारदेखि सामूहिक बेलविवाह शुरू भएको छ । माईस्थान पार्कमा आयोजित बेलविवाहमा २८ जना नेवार समुदायका बालिकाहरू सहभागी थिए । प्रत्येक वर्ष माईस्थान ईही समितिले बेलविवाहको आयोजना गर्दै आएको छ । नेवार समुदायका ५ देखि ११ वर्षका बालिकाहरूको सामूहिकरूपमा बेलसँग विवाह गराइन्छ । आजदेखि शुरू भएको बेलविवाह आइतवार सम्पन्न हुन्छ । नेवार समुदायमा सो उमेरका बालिकाहरूको पहिले बेलसँग र पछि सूर्य देवतासँग विवाह गर्ने प्रचलन रहेको प्रकाश जोशीले बताए । मल्लकालीन राजाको पालादेखि नेवार समुदायले यो परम्परालाई निर्वाह गर्दै आएको जोशीले बताएका छन् । पण्डित मार्कण्डेय उपाध्याय र प्रकाश जोशीले विधिसम्मतरूपमा बेलविवाह गराइरहेका छन् ।
बिजुली सपना र यथार्थ
ओमप्रकाश खनाल केहीअघिसम्म सञ्चारमाध्यमहरूमा बिजुलीको न्यून खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका प्रचार सामग्री देख्न/सुन्न पाइन्थ्यो । यतिखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को खपत नबढेकोमा चिन्तित देखिएको छ । उत्पादनका हिसाबले यो सुखद सङ्केत हो । तर यही अवस्थाको निरन्तरता भने सहज हुनेछैन । खपत कसरी उपायमा सरोकारका पक्षसितको अन्तत्र्रिmया बाक्लिएका छन् । सरकारले खपत अभिवृद्धिका एकाध योजना पनि बनाएको होइन । तर सरकारी नीति हेर्दा समस्या एकातिर, समाधान अर्कातिर खोजिएको भान हुन्छ । दीर्घकालीन उपायमा आवश्यकता जति मन्थनसमेत सुन्न पाइएको छैन । अहिले विद्युत्को औसत माग १३ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । यसमध्ये प्राधिकरणको आप्mनो उत्पादन ५४६ मेगावाट, निजी क्षेत्रको ४३६ मेगावाट र बाँकी भारतबाट आयातित बिजुलीबाट आपूर्ति भइराखेको छ । ४५० मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीले उत्पादन शुरू गरेको अवस्थामा वर्षामा विद्यत् खेर जाने अवस्था छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रसँग यसरी ६ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ । उत्पादकसँग गरेको सम्झौता अनुसार सरकार निजी क्षेत्रको बिजुली जसरी पनि किन्नैपर्न
जीवनशैली हाम्रो जीवन जिउने तरीका हो । व्यक्तिले जस प्रकारले आप्mनो जीवनयापन गर्दछ, त्यो नै उसको जीवनशैली हो । जीवनशैली जस्तोसुकै पनि हुन सक्छ । त्यसमा प्रत्येक दिन एकै जस्तो कार्य सामेल हुन सक्छ वा त्यसमा प्रत्येक दिन थरीथरीका परिवर्तन पनि सामेल हुन सक्छ । हाम्रो जीवनशैली अधिकांश परिवेश तथा परिस्थितिमाथि निर्भर हुन्छ, तर जीवट, सुसंस्कृत तथा विवेकवान मनुष्य हर प्रकारका अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम हुन्छ । प्रतिकूल परिस्थितिको स्थितिमा ऊ विचलित हुँदैन, बरु सङ्घर्ष गरेर प्रतिकूल परिस्थितिको स्थितिलाई अर्कोतर्पm मोडिदिन्छ । यसै प्रकार अनकूल परिस्थितिमा ऊ आप्mनो प्रगति तथा विकासको मार्गमा तेज गतिले अगाडि बढ्छ । यसको विपरीत स्वभावले नै कमजोर व्यक्ति हावाको झोंकाजस्तो प्रतिकूल परिस्थितिको बहावमा बहन थाल्छ । उसको जीवनशैली परिवेशको अनुरूप ढल्न थाल्छ, किनकि उसले आप्mनो मस्तिष्कको उचित प्रयोग गर्दैन । ऊ त्यति दृढ निश्चयी पनि हुँदैन कि विपरीत परिस्थितिले व्यक्तिलाई केही बेर डराउन सक्छ, तर उसलाई मुकामसम्म पुग्नको लागि रोक्न सक्दैन । हाम्रो समाजको संरचना यसरी बनेको छ
२०७६ मङ्सिर १४ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
पर्सेली सुर्ती किसान निराशामा, सञ्चय बढी भएकोले सुर्ती खेतीमा रोक –सूर्य नेपाल
प्रस, सेढवा, १३ मङ्सिर/ सूर्य नेपालले यस वर्ष फागुन महीनामा हुने सुर्तीखेती नगर्न सूचित गरेपछि पर्साका किसानहरूमा निराशा छाएको छ । प्रत्येक वर्ष असोज र फागुन महीना गरी दुईपटक सुर्तीबाली लगाउँदै आएका किसानहरू अहिले सूर्य नेपालको सूचनापछि निराश भएका छन् । सूर्य नेपालका सुर्ती फाँट प्रमुख माधव खनालले सुर्तीको सञ्चय बढी भएको कारण यस वर्ष फागुन महीनामा गरिने सुर्तीखेतीमा रोक लगाइएको प्रस्ट्याए । कारखानाले यसअघि डेढ वर्षको लागि आवश्यक सुर्ती सञ्चय गर्दै आएकोमा यसपटक तीन वर्षलाई पुग्ने सुर्ती सञ्चय भएको कारण किसानहरूलाई फागुन महीनामा गरिने खेती नगर्न सूचित गरिएको उनले बताए । प्रमुख खनालले निर्यातका लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै निर्यात गर्न सफल भएको खण्डमा सूचना रद्द हुन सक्ने पनि जानकारी गराए । तर तत्काल निर्यातको लक्षण नदेखिएको उनको भनाइ छ । सूर्य नेपालले सिगरेट उत्पादनमा आवश्यक आरजी, एचडिबी र बर्नी जातका गरी तीनथरीको सुर्ती पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही र धनुषासमेतबाट सङ्कलन गर्छ । सूर्य नेपालले भर्जिनिया जातको सुर्ती मात्र आयात गर्छ । यही कारण हो स्थानीय किसानहरूलाई सुर्ती खेत
लाखभन्दा बढीले गरे गढीमाईको दर्शन
प्रस, परवानीपुर, १३ मङ्सिर/ बाराको गढीमाई मेलामा शुक्रवारसम्म एक लाखभन्दा बढी भक्तजनले मन्दिरमा दर्शन गरेको बताइएको छ। दशैं, तिहार, छठदेखि नै गढीमाई मन्दिरमा दर्शन गर्नेहरूको भीडभाड बढेको थियो । मङ्सिर १ गतेदेखि एक महीनाको लागि लाग्ने मेलामा आजसम्म एक लाखभन्दा बढीले दर्शन गरेको अनुमान गरिएको छ । एक सातादेखि दैनिक ५ हजारभन्दा बढी श्रद्धालु भक्तजनले मन्दिरमा पूजापाठ तथा दर्शन गरेको मेलाका मिडिया संयोजक मुकेश यादवले बताए । “अहिले यकिन भन्न गा¥हो छ, तर पछिल्लो समय जुन हिसाबले मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनको भीडभाड बढ्दै गएको छ, एक लाखभन्दा बढीले दर्शन गरेको हुन सक्छ,” उनले भने । मेला समितिका पदाधिकारीहरूले भने दशैंदेखि करीब २ लाख श्रद्धालुहरू पूजा गर्न आइसकेका छन् । मेलामा ६ सयभन्दा बढी पसल लागिसकेका छन्, मेलामा मौतका कुवाँ, सर्कस, झुला, वैष्णोदेवीको कृत्रिम घरबार तथा मनोरञ्जनका साधनहरू आइसकेका छन् । मन्दिरभन्दा पूर्व, दक्षिण, पश्चिमको करीब एक किलोमिटरसम्म प्रतिवर्गफिट क्षेत्रफलको रु ५ सयको दरमा मेला समितिले ठेकेदारमार्पmत् जग्गा लिजमा दिइरहेको छ । जग्गाको टेन्डर मेला समितिले रु
छानबीन नभएसम्म नियुक्ति प्रक्रिया स्थगन
प्रस, परवानीपुर, १३ मङ्सिर/ वीरगंजस्थित ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसमा हालै भएको सातजना आंशिक उपप्राध्यापकको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगन भएको छ । नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र अनियमितता भएको भन्दै विद्यार्थी युनियनले विरोध तथा हडताल शुरू गरेपछि स्थानीय प्रशासनले नियुक्ति प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बिहीवार साँझ भएको विवाद समाधान गर्न पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विद्यार्थी युनियन र क्याम्पस प्रशासनबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि हालै गरिएको आंशिक उपप्राध्यापकको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगन गर्ने, नियुक्ति प्रक्रिया छानबीनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञ टोली बोलाउने, लेखा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीले तीनतिरबाट तलबभत्ता खाने विषयमा छानबीन अघि बढाउने तथा क्याम्पसका विभिन्न शाखामा विद्यार्थी युनियनबाट गरिएको तालाबन्दी खुलाइ पठनपाठनको वातावरण बनाउने सहमति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ । ठाराब क्याम्पसले मङ्सिर १० गते टाँस गरेको सूचनाको आधारमा राजनीतिकशास्त्रमा रीतिका जैसवाल,
बस दुर्घटनामा सैनिकसहित ३९ जना घाइते
प्रस, निजगढ, १३ मङ्सिर/ महेन्द्र राजमार्गको निजगढ—पथलैया सडकखण्डको निजगढमा यात्रुवाहक बस शुक्रवार पुलबाट खस्दा ३९ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर छ । गम्भीर घाइते हुनेमा मकवानपुर घर भएका धनुषा जलेश्वरस्थित रणभूमि गणमा कार्यरत नेपाली सेनाका लेन्सनायक सानुबाबू कार्की रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले जनाएको छ । उनको घाटीको हड्डी भाँचिएको र टाउकोमा गहिरो चोट लागेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएको इप्रका निजगढका प्रहरी निरीक्षक विकास थपलियाले जानकारी गराए । त्यसैगरी, घाइते हुनेहरूमा सोही गणका जमदार कृष्ण श्रेष्ठ, लेन्सनायक प्रकाश कार्की, महादेव चौधरी, सिपाही अनजना राई, ९ नम्बर वाहिनी अड्डाका सिपाही भरत विक, अर्की यात्रु महोत्तरी बर्दिवासकी ५५ वर्षीया तारा श्रेष्ठ, ठेगाना खुल्न नसकेको ८ वर्षीय बालक आशिक शर्मालगायत ३४ जना यात्रु दुर्घटनामा परी घाइते भएका प्रदेश नं. २ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराले जनाएको छ । घाइते यात्रुहरूको प्राथमिक उपचार निजगढ अस्पतालमा गरी थप उपचारको लागि वीरगंजस्थित नेशनल मेडिकल बलेज, वयोधा अस्पताल, हेटौंडाको चुरेहिल अस
निश्शुल्क आँखा शिविर सम्पन्न
प्रमोद यादव, पंचगावाँ, १३ मङसिर/ पर्साको धोबिनी गाउँपालिका–२ भिखमपुरस्थित जनसामुदायिक विकास केन्द्रको आयोजनामा सामुदायिक अFँखा अस्पताल हेटौंडाको सहयोगमा निश्शुल्क अFँखा शिविर सम्पन्न भएको छ । शिविरको उद्घाटन पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए । उनले ग्रामीणवासीलाई लक्षित गरेर निश्शुल्क शिविर सञ्चालन गरेकोमा आयोजक संस्थाको प्रशंसा गरे । आर्थिक समस्याले आँखाजस्तो महŒवपूर्ण अङ्गको उपचार लिन नसकेका गाउँलेहरूलाई शिविर लाभदायक साबित हुने बताउँदै प्रजिअ भट्टराईले ग्रामीण क्षेत्रमा थप शिविर सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा सामाजिक कार्यकर्ता प्रकास थारूले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पछाडि परेको बताए । उनले गाउँलक्षित शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू हुनुपर्नेमा जोड दिए । धोबिनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश साहले सबैको सहयोग रहे धोबिनी गापालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नमूना बनाउने दाबी गरे । उनले यसका लागि आउँदो गाउँसभाबाट छुट्टै बजेट विनियोजनका लागि प्रयास गरिने र वडास्तरमा शिक्षा र स
एचआइभीको अवस्थाबारे अन्तक्र्रिया
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ विजामद्वारा नारायणी अस्पतालमा सञ्चालित एआरटी सेन्टर र अमेरिकी हेल्थ केयर फाउन्डेशनको आयोजनामा एचआइभी एड्सको अवस्थाबारे अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम भएको छ । नारायणी अस्पतालको हलमा सम्पन्न अन्तत्र्रिmयामा डा अतुलेशकुमार चौरसियाले सीमा क्षेत्रमा एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेकोले यसतर्पm सरोकारवाला संस्थाहरू सचेत हुनुपर्नेमा जोड थिए । उनले सङ्क्रमितको सङ्ख्या नियन्त्रणका लागि सबै उपायको सचेत तरीकाबाट अवलम्बन गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा एड्स हेल्थ केयर फाउन्डेशनका जिल्ला प्रतिनिधि आशीष गुरागाईंले हालसम्म २७८ जना पुरुष, ४२४ जना महिला, २२ जना तेस्रोलिङ्गी तथा ५१ जना बालबालिका गरी ७७५ जनाले एआरटी सुविधा लिंदै आएको बताए । उनले ८९ जना पुरुष, १३७ महिला, २ जना तेस्रोलिङ्गी र २० जना बालबालिकाले नारायणी अस्पतालबाहेक अन्य जिल्लाबाट सेवा पाइरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले अस्पतालबाट एआरटी सेवा लिनेमा ग्रामीण क्षेत्रबाट ४९ जना सम्पर्कमा रहेको बताए । कार्यक्रममा डा मनोज गुप्ता, वीरगंज महानगरपालिकाका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख अरुणकुमार महतो, विजामका अ
सार्वजनिक शौचालय सरसफाइ नगरिंदा रतनपुरी हाटबजारमा दुर्गन्ध
प्रस, निजगढ, १३ मङ्सिर/ निजगढ नगरपालिका–११ रतनपुरी हाटबजारस्थित सार्वजनिक शौचालय सरसफाइ नगरिंदा दुर्गन्ध बढेको छ । निजगढ नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा सो हाटबजार ठेक्कामा लगाएको हो । ठेक्का लगाए पनि शौचालय सरसफाइमा ठेकेदारले चासो देखाएको छैन । हाटबजारका व्यापारी र उपभोक्ताहरूको सहजताको लागि बनाएको शौचालय सर सफाइ नहुँदा बजार क्षेत्रमा शौचालयको दुर्गन्ध पैmलिएको छ । हाटबजारको उत्तरपूर्वतर्पm महिला र पुरुषका लागि दुई/दुई कोठाको ४ कोठे सार्वजनिक शौचालय छ । मूत्र विसर्जनका लागि पनि छुट्टै स्थान छ । तर सरसफाइ छैन । सरसफाइ नभएकोले सही ठाउँमा पुग्न नसकेपछि शौचालयवरिपरि जथाभावी यत्रतत्र मलमूत्र विसर्जन गरिएको पाइन्छ । हाटबजारको दिन त शौचालयको दुर्गन्धले नाकमुख थुनेर हिंड्नुपर्ने अवस्था छ । शौचालय प्रयोग गर्न चाहनेहरूले त नाकमा बाक्लै कपडा बाँधेर पनि भित्र जान गा¥हो हुने बताउँछन् । दुर्गन्धित शौचालयमा पुग्न गा¥हो मान्नेहरूले आसपासकै वनजङ्गल क्षेत्रमा मलमूत्र विसर्जन गर्ने गरेका छन् । खुला दिसापिसाबले झन् समस्या थप्ने हाटबजार क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई च
उमाशङ्कर द्विवेदी तदन्तर, भीष्मजी मौन भएपछि सबै राजा आआप्mनो शिविरमा फर्किगए । यसै बेला कर्ण भीष्मजी मारिएको कुरा सुनेर अलिक भयभीत भएर छिट्टै उनको छेउमा आइपुगे । उनलाई शरशøयामाथि सुतिरहेको हेरेर कर्णको आँखामा आँसु छचल्किएर आयो । कर्णले अवरुद्ध कण्ठले भने– महाबाहु भीष्मजी, जसलाई तपाईंले सदैव द्वेषले भरिएको दृष्टिले हेर्नुहुन्थ्यो, सोही म राधापुत्र कर्ण तपाईंको सेवामा उपस्थित भएको छु । यो सुनेर भीष्मजीले आँखा खोलेर बिस्तारै कर्णतिर हेरे । यसपछि त्यस स्थानलाई सुनसान हेरेर पालेहरूलाई पनि त्यहाँबाट हटाइदिए । अनि फेरि जसरी पिताले पुत्रलाई अँगालो हाल्छ, त्यसै प्रकार एक हातले कर्णलाई तानेर ह्दयमा टसाउँदै स्नेहपूर्वक भने–आऊ, मेरो प्रतिस्पर्धी, तिमी सदैव मसित भेदभाउ गर्दछौं । यदि यतिबेला तिमी मेरोनजीक नआएको भए निश्चित नै तिम्रो कल्याण हुने थिएन । महाबाहो, तिमी राधाको होइन कुन्तीको पुत्र हौ । तिम्रो पिता अधीरथ न भएर सूर्य हुन्–यो कुरा मलाई व्यास र नारदजीबाट ज्ञात भएको थियो । यो नितान्त सत्य हो, यसमा अलिकति पनि सन्देह छैन । बाबु, म साँचो भन्दैछु, तिमीसित मेरो अलिक पनि द्वेष छैन, तिमी अकारण न
विदेह, तिरहुत र मिथिला — एक संक्षिप्त चिनारी
बासुदेवलाल दास प्राध्यापक, इतिहास विभाग ठाराब क्याम्पस, वीरगंज गताङ्कको बाँकी... विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत, महाभारत जस्ता ग्रन्थहरूमा भगवान् श्रीकृष्ण तीनपटक मिथिला क्षेत्रमा आएका वर्णन गरिएको पाइन्छ । यस्तै, परवर्तीकालमा भगवान् बुद्ध र भगवान् महावीर अनेकपटक मिथिलामा आएका थिए भन्ने जानकारी तत्कालीन साहित्यहरूको अध्ययनबाट पाइन्छ । जैन धर्मका एक्काइसौं तीर्थङ्कर नमिनाथको जन्म मिथिलामा नै भएको तथा चौबीसौं तीर्थङ्कर भगवान् महावीर पनि आप्mना ६ वटा वर्षाबास (वर्षा–ऋतुको समय) मिथिलामा नै बिताएका थिए भनी उल्लेख पाइन्छ । यस्तै, बौद्ध–साहित्य अन्तर्गत मानिएका जातक भनिने ग्रन्थहरूमा मिथिलाको वर्णन पाइन्छ । यीमध्येका महाजनकजातक, निमिजातक, महानारदकस्सपजातक तथा महाउम्मगजातक सदृश ग्रन्थहरू भने पूर्णतः मिथिलासम्बन्धी विषयवस्तुमाथि नै आधारित रहेका छन् । विक्रम संवत्को सातौं शताब्दीमा मानिएका लेखक वराहमिहिरकृत बृहत्संहिता ग्रन्थमा विदेहको उल्लेख पूर्वीय क्षेत्रका जनपद र नगरहरूको सूचीमा गरिएको छ भने यसमा मिथिलाको उल्लेख पनि रहेको छ । त्यस्तै, दण्डी कृत दशकुमारचरित ग्रन्थमा विदेह र मिथिला दुवैको चर्
समय महान् हो
राजेश मिश्र इन्सान बडा नहीं होता, समय बडा होता है अर्थात् मानिस महान् हुँदैन, समय महान् हो । आज जुन वृद्धसँग संवाद गरियो, उनको बैठक गोलघरमा उपरोक्त पङ्क्ति लेखिएको रहेछ । सन् १९९१ मा रिलिज हिन्दी फिल्म ‘घरपरिवार’मा एउटा गीतको बोल रहेको छ, समय बडा बलवान रे भैया समय बडा बलवान । उनको गोलघरमा लेखिएको उपरोक्त पङ्क्ति र घरपरिवारको यो गीत–हिजो, आज र भविष्यमा पनि समय सान्दर्भिक रहनेछ । र, मानवसभ्यतालाई समयचक्रको अनुबन्धमा रहन जीवनपर्यन्त अभिप्रेरित गरिरहनेछ । मानिस जन्मदेखि नै समयचक्रसँगै हिंडिरहन्छ । सङ्घर्ष गरिरहन्छ । समयको गतिभन्दा कम गतिमा वा उच्च गतिमा हिंडिरहे पनि भूलोकमा जन्म लिने हरेक प्राणी एक न एक दिन थकित हुनैपर्छ । हार खानैपर्छ । भूलोक त्याग्नै पर्छ । समय हार्दैन । सधैं समयको जीत हुन्छ । समय गतिमान रहिरहन्छ । यो ध्रुवसत्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन । समयको हरेक सेकेन्डमा जन्म र मृत्युको क्रम चलिरहन्छ । समयको गतिक्रमसँगै कोही उकालो चढिरहेको हुन्छ भने कोही ओरालो लाग्दै गरेको हुन्छ । उनको बैठक गोलघरको चारैतर्पm ज्ञानका पङ्क्तिहरू काठमा कोरिएका छन् । सोही पङ्क्तिहरूको मुनि
संस्कृतिको रूपमा विस्तार हुँदै गढीमाई मेला
सञ्जय मित्र संस्कृतिको अर्थ उत्तम वा सुध्रेको स्थिति हो । कुनै भावना वा विचारबाट संस्कृत हुनु र यसले कार्यरूप लिनु संस्कृति हो । सभ्यताले मनुष्यको भौतिक क्षेत्रको प्रगति सूचित गर्दछ भने संस्कृतिले भौतिकताभन्दा बढी मानसिक क्षेत्रको प्रगतिलाई सङ्केत गर्दछ । सभ्यता र संस्कृति पूरै एकापसमा पृथक नभए पनि पूर्णरूपमा एउटै पनि होइन । वास्तवमा संस्कृति कुनै समाजमा गहिराइसम्म व्याप्त समग्र स्थिति हो । समाजको सोच्ने, विचार गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने, कार्य गर्ने, खाने, पिउने, बोल्ने, नृत्य गर्ने, गाउने, चित्र बनाउने, घर बनाउने, मूर्ति बनाउने, साहित्य सिर्जना गर्ने आदिको सम्पूर्णतालाई संस्कृति भन्न सकिन्छ । संस्कृति भन्नु नै व्यापक जीवनशैली वा जीवनपद्धति होभन्दा अत्युक्ति नहोला कि ? यसैले दीर्घकालदेखि चलिआएको वा अपनाइएको पद्धतिहरूको समष्टिलाई संस्कृति भनिएको पाइन्छ । कुनै निश्चित ठाउँको आप्mनो अस्तित्व उसको संस्कृतिले नै दर्शाउँछ । दीर्घकालको जीवनपद्धति मानिएकोले यसले आपूmमा इतिहास पनि ओगटेको हुन्छ । तर इतिहास मात्र चाहिं संस्कृति होइन वा हुन सक्दैन । सामान्य दृष्टिमा इतिहास भनेको विगतका घ
२०७६ मङ्सिर १३ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
प्रस, निजगढ, १२ मङ्सिर/ निजगढ नगरपालिका–७ को चौतारा युवा क्लबले ८२ वर्षीय असहाय वृद्धलाई घर बनाइदिने भएको छ। बिहीवार विशेष समारोहमा निजगढ नगरकी उपप्रमुख लीलादेवी लामिछानेले वृद्धको घर शिलान्यास गरेकी छन्। सो अवसरमा उपप्रमुख लामिछानेले क्लबले गर्न लागेको सेवा कार्यबाट निजगढ नगरपालिकाले पनि पाठ सिक्नुपर्ने बताउँदै गरीबीले पिल्सिएका सहाराविहीन, बास नभएकाहरूको पहिचान गरी बासको व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने महसूस भएको बताइन्। निनपा–७ का वडाध्यक्ष रामजी बजगाईंले पनि क्लबको कार्यको खुलेरै प्रशंसा गरे। बेसहारालाई सहारा दिनु, बास नहुनेलाई बास बनाइदिनु नै मानवको पुण्य कार्य र धर्म रहेको बताउँदै ६ महीनाअघि मात्रै तिनै दुर्गाबहादुरको ८२ वर्षको उमेरमा चौतारा क्लबको सक्रियतामा नागरिकता बनाइएको स्मरण गरे। क्लबले बेसहारा वृद्धलाई घर बनाइदिने कार्य उदाहरणीय रहेको महिला समाजसेवी सावित्री भारती र महिला जनप्रतिनिधि जगतकुमारी न्यौपानेले बताइन्। क्लबले तिहार पर्वमा देउसीभैलो खेलेर सङ्कलन गरेको रकमबाट स्थानीय बेसहारा वृद्ध दुर्गाबहादुर रानामगरलाई घर बनाइदिने
बलिका लागि ल्याइएका राँगाहरू मर्न थाले हेरचाहमा जुट्दै पशु कल्याण र महिला मञ्च
प्रस, कलैया, १२ मङ्सिर/ गढीमाई मन्दिरमा भाखल दिन ल्याएका राँगाहरूमध्ये तीनवटा राँगा मरिसकेको छ। खान नपाएर र जाडोका कारण तीनवटा राँगा मरेको पशु कल्याण सङ्घ नेपालका अगुवा तनुजा बस्नेतले जानकारी दिइन्। महागढीमाई नगरपालिका वडा नं १ स्थित गढीमाईमा भाखल गरेका भक्तालुहरूले बलि चढाउन ल्याएका राँगाहरूको दुरवस्थालाई देखेर पशु कल्याण सङ्घ नेपालले दाना खुवाउन शुरू गरेको छ। १५ सयवटाभन्दा बढी राँगा मेलामा आइसकेको र आउनेक्रम जारी रहेको मेला व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । बलिका लागि मेलास्थलमा ल्याइएका राँगाहरूको खाने र बस्ने स्थान राम्रो नभएको र कष्टकर अवस्थामा रहेकाले तिनीहरूको लागि पशु कल्याण समाज र महिला विकास मञ्च बाराले आहार जुटाउन शुरू गरेको पशु कल्याण सङ्घ नेपालका अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले बताइन्। अज्ञान पशुलाई पनि मानव सरह व्यवहार गर्नुपर्ने पशु अधिकारकर्मीहरूको सुझाव छ। राँगाहरूको लागि ९० किलो बन्दाकोभी, ८ सय किलो दाना मेला समितिलाई प्रदान गरेको बारा महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कलावती पासवानले जानकारी गराएकी छन्। मङ्सिर १७ गतेसम्म ती राँगाहरूका लागि खाने र न्यानोका लागि परालको व्
रक्सीले मात्तिएर महिलाको घरमा पसेपछि...
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ पर्सा, जगरनाथपुर गाउँपालिका–४ बस्ने असी करीम मियाँ सोही गापाको वडा नं. १ पिपरडारी टोलकी एक महिलाको घरमा जबरजस्ती प्रवेश गरेको समाचार प्राप्त भएको छ। रक्सीले मात्तिएका ३० वर्षीय मियाँ राति १२ बजे अचानक घरमा पुगेपछि घरपरिवारका सबैजना तर्सिएका थिए। उनीहरूले सम्झाउन खोज्दा घरकी महिलाहरूमाथि झम्टिन खोजेको तथा गालीगलौज गरेपछि गाउँलेहरूले मियाँलाई नियन्त्रणमा लिंदै इलाका प्रहरी कार्यालय सेढवामा बुझाएका थिए। पीडित महिलाले वीरगंज आई डाँका मुद्दाको जाहेरी शुक्रवार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिने बताएकी छन्। पक्राउ परेका मियाँलाई जगरनाथपुर गापाका अध्यक्ष्F जालीम मियाँले आप्mनो जमानतमा भोलि उपस्थित गराउने शर्तमा बिहीवार बिहान रिहा गराएर लगेको इलाका प्रहरी कार्यालय सेढवाका प्रनानि महावीर यादवले बताए। गापा अध्यक्षको अनुरोधमा शुक्रवार प्रहरी चौकीमा पञ्चायती बसेर छलफल गरी मिलापत्र गरिने कुरो आएपछि आपूmले अमानतमा छाडेको उनले बताए । असी करीम मियाँ गापा अध्यक्ष्F जालिम मियाँका सवारीचालक हुन्।
शुक्रवारदेखि प्याजको भाउ ओरालो लाग्ने
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ गत वर्षात्मा भारतको मध्यप्रदेश र नासिकमा बाढी आउँदा किसानले भिœयाएको प्याज ठूलो परिमाणमा कुहिएर नष्ट भएको थियो। जसले गर्दा भारतमैं मागबमोजिम प्याज नपाएपछि भारत सरकारले प्याज विदेश निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो। सोही कारण अहिले नेपालमा प्याजको भाउ उच्च भएको छ । तर प्याजमा भएको मूल्यवृद्धि अब दुई सातापछि समाधान हुने वीरगंजका तरकारी तथा फलपूmल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तरकारी तथा फलपूmल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष्F विदुर गुप्ताका अनुसार अहिले प्रतिकिलो रु १६५ देखि रु १८० सम्म बिक्री भइरहेको प्याज १५ दिनपछि करीब आधा घट्नेछ । भारतको नासिक र मध्यप्रदेशलगायत अन्य राज्यमा यस वर्ष लगाइएको प्याज निस्किन थालेपछि हरेक दिन कम्तीमा रु ५ ले प्याजको भाउ घट्दै जाने उनले अनुमान गरे। पर्सा, बारामा प्याज न्यून मात्रामा उत्पादन हुने भएकोले वीरगंजमा प्याजको मूल्य उच्च छ। साथै भारतबाट भित्रिने प्याजको भरमा नेपालको वीरगंज, कलैया, जीतपुर, सिमरा, निजगढ, रौतहट, लालबन्दी, हेटौंडा, भरतपुर, काठमाडौं, पोखरालगायतका शहरहरू पनि निर्भर रहेकाले ती शहरहरूमा पनि प्याजको भाउ प्रतिकिलो रु २५०
बहुदरमाईको वडा कार्यालयमा तालाबन्दी
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ बहुदरमाई नगरपालिका–२ का बासिन्दाले वडा समितिको कार्यालयमा बिहीवार दिउँसो तालाबन्दी गरेका छन् । नपाको वडा नं. २ र ३ पर्ने पिपरा गाउँको उत्तरपट्टि बग्ने नहर (टर्सरी) केही वर्षदेखि पुरिएको र नहर खन्न नपाले कुनै वास्ता नगरेपछि आक्रोशित गाउँलेहरूले वडासमितिको कार्यालयमा गई तालाबन्दी गरेका हुन्। यस विषयमा ६ महीनाअघि नपा तथा वडा कार्यालयमा स्थानीयवासीले निवेदन दिंदा वडा कार्यालय तथा नपाले कुनै सुनवाइ नगरेपछि डेलिगेशन लिएर पुगेको समूहलाई वडाध्यक्ष जितेन्द्र पटेलले अहिले म केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको तथा तपाईंहरूले जे गर्नुछ गर्नुस् भनेपछि आक्रोशित भीडले उनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो। तालाबन्दी गर्न पुगेका गाउँलेहरूले सोही बखत बहुदरमाई नपामा पुगेर नपाको कार्यालयमा पनि नहर खन्न निवेदन दिएका छन्। पिपराका बासिन्दा तथा राजपाका महासचिव शिव पटेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले नपाका नायब सुब्बा रामबाबू प्रसादलाई निवेदनपत्र दिएको थियो। गाउँको नाला मिसिने उक्त नहर तिलावे खोलामा पुग्छ। जसले गर्दा गाउँको पानीको निकास हुन सकेको छैन। अहिले सो नहर पुरिएपछि गाउँको न
जन्मदिनमा शैक्षिक सामग्री वितरण
प्रस, कलैया, १२ मङ्सिर/ कलैया उपमहानगर–५ घुसुकपुर निवासी अनिल मण्डलले आप्mनो जन्मदिनको अवसरमा कलैया–३ स्थित माझी मुसहर बस्तीका बालबालिकाहरूलाई शैक्ष्Fिक सामग्री वितरण गरेका छन्। मण्डलले ३१औं जन्मदिनको अवसरमा उक्त बस्तीमा विद्यालय जाने उमेरका करीब १० जना बालबालिकालाई कापी, पेन्सिल, कटर, इरेजरलगायतका शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका थिए। उनले जन्मदिनमा अनावश्यक खर्च नगरी गरीब बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेकोमा सन्तोष लागेको बताए ।
सिमेन्टको धूलो–धूवाँबीच मजदूरले कसरी स्वास्थ्य हेरचाह गर्छन् ?
विमला गुप्ता, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा एक दर्जन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। नारायणी, विश्वकर्मा, जगदम्बा, अम्बे, कलश, ओम, शालिमार, कृष्णा, एडभान्स, रिलायन्सलगायत सिमेन्टका उद्योगहरूबाट निस्किने धूलोले मानव शरीरमा प्रत्यक्ष हानि पु¥याउँछ। गरीब मजदूरहरूलाई यहाँ काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। तर धेरैलाई मनमा जिज्ञासा पनि हुन्छ, सिमेन्ट उद्योगमा सिमेन्टको धूलोसँग लडेर काम गरिरहेका मजदूरहरू कसरी आप्mनो स्वास्थ्यको रेखदेख गर्छन् ? नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रालिको मजदूर युनियनका अध्यक्ष प्रदीप महतोका अनुसार वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत रहेको नारायणी सिमेन्ट उद्योगमा उत्पादन हुने ब्रान्ड त्रिशक्ति, बज्रशक्ति तथा त्रिशक्ति सुपर सिमेन्ट हुन्। यो उद्योगको स्थापना २०६० सालमा भएको हो। यहाँ कुल ४५ जना मजदूर कार्यरत छन्। दैनिक यस सिमेन्ट उद्योगमा १० देखि ११ हजारसम्म सिमेन्टका बोरा तयार हुने गर्दछ। यस उद्योगले मजदूरहरूको बाहिरी सुरक्षाको लागि माक्स, उद्योग परिसरभित्र लगाइने पोशाक, कपडाको जुत्तालगायत हेल्मेटको व्यवस्था गरेको छ। काम गर्दा सिमेन्टको धू
गढीमाईमा बलिको लागि भारतबाट जाने पशुमाथि रोक
प्रस, रक्सौल, १२ मङ्सिर/ गढीमाई मेलामा बलिको लागि भारतबाट नेपाल जाने पशुमाथि रोक लगाइएको छ। रक्सौलका एसडिएमको कडा निर्देशनमा भारतबाट नेपाल जाने पशु नियन्त्रणको लागि रक्सौलमा २१ वटा चेकपोस्टको निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। रक्सौल अनुमण्डलका पदाधिकारी अमित कुमारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अञ्चलाधिकारी एवं थानाध्यक्षहरू सहभागी थिए। बैठकमा भारतबाट बलिको लागि जाने पशु रोक्ने निर्देशन दिइएको थियो । एसडिएमका अनुसार रक्सौल क्षेत्रमा २१ स्थानमा चेकपोस्ट निर्माण गरी त्यहाँ सुरक्ष्Fाकर्मी तैनाथ गरिने र नियन्त्रणमा लिएका पशुको उचित व्यवस्थापनको लागि पशुपालन पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइएको बताइन्छ। विशेष कार्ययोजना अनुसार राति निगरानी बढाउन चौकीदारको माध्यमबाट सूचना प्राप्त गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
टी–२० नकआउटः गौतम र मनकामना विजयी
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ नेपाल मेडिसिटी प्याब्सन टी–२० नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीवार भएका दुईवटा खेलमा गौतम मावि र मनकामना मावि विजयी भएका छन्। पहिलो चरणको खेल गौतम र ज्ञानज्योति माविबीच भएको थियो। टस जितेर गौतम माविले सबै ओभर खेल्दै ९ विकेटको क्षतिमा १४५ रन बनाएको थियो। प्रतिउत्तरमा ज्ञानज्योतिले १९.५ ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा ११८ रनमा सीमित हुन पुग्यो। खेलको म्यान अफ द म्याच गौतम माविका मन्थन यादव घोषित भए। दोस्रो खेल मनकामना र बिकन माविबीच भएको थियो। टस जितेर मनकामनाले ७ विकेटको क्ष्Fतिमा सबै ओभर खेल्दै १५० रन बनFएको थियो भने प्रतिउत्तरमा बिकनले १८.३ ओभरमा १० विकेट गुमाउँदै ९४ रनमा चित्त बुझाउनुप¥यो। खेलको म्यान अफ द म्याच मनकामनाका अभय यादव घोषित भए।
ज्ञानदा एकेडेमीद्वारा खेलकूद दिवस शुरू
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ ज्ञानदा एकेडेमी, वीरगंजले दुई दिने खेलकूद दिवस कार्यक्रम बिहीवारदेखि शुरू गरेको छ। हरेक वर्ष नोभेम्बर महीनामा मनाउने यो दिवसमा विविध किसिमका खेलकूद क्रियाकलाप हुँदै आएको छ। विद्यालयका प्रिन्सिपल क्लेरेन्स पिटरको सभापतित्व तथा वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा विद्यालय सञ्चालक समितिका पवन पोदार, रविकुमार सिकरिया, प्रशान्त जलानलगायतको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि बस्नेतले यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूको शारीरिक तथा मानसिक क्षमतामा वृद्धि गर्ने र स्वस्थ रहन सघाउने बताए। कार्यक्रमको अवसरमा विद्यार्थीहरूले मार्चपाससहित विभिन्न झाँकी प्रस्तुत गरेका थिए। आजको खेलकूदमा शिशुदेखि कक्ष्Fा ५ सम्मका छात्रछात्राहरूले विभिन्न खेलकूदमा सहभागिता जनाएका थिए।
प्रदेश २ मा विकास निर्माण
मुलुकको सत्तासीन दल नेकपाले प्रदेश २ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनसभा कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो। निजगढमा भएको सभामा सो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणसँग आप्mनो लभ परेको दाबी गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले प्रदेश नं २ मा विकासको क्रान्ति नै ल्याउने भन्दै विकास निर्माणबाट यस प्रदेशको मुहार परिवर्तन गरिने बताएका छन्। विकासको मार्गबाट प्रदेश २ मा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अध्यक्ष्F दाहालले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हिजोका दिनमा ११ वर्षसम्म जनयुद्ध हाँकेर ध्वन्सको राजनीति गर्दै हिंडेका अध्यक्ष प्रचण्डको नारा नै थियो ‘ध्वंसपछि निर्माण’ अर्थात् ‘निर्माणका लागि ध्वंस गरौं।’ प्रचण्डको अभिव्यक्तिले अब निर्माणको बेला आएको हो त ? नागरिकमा कौतुहलता जागेको छ। निजगढको कार्यक्रम दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएर कार्यकारी अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम हो। महŒवपूर्ण सभा भएकोले यसमा जाहेर भएका प्रतिबद्धताहरू अधिकांश कार्यान्वयन होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। मुलुकका ७ वटा
उखु किसानका पीडा
श्रीमन्नारायण नेपालका उखु किसानहरूले हरेक वर्ष मूल्यको लागत र भुक्तानीको सन्दर्भमा झमेला र दुःख खेप्नुपर्दछ। नगदेबाली ठानेर उखुखेतीतिर आकर्षित भएका किसानहरू अब उखुखेतीबाट विमुख हुन थालेका छन् । उनीहरूले आप्mनो उत्पादन चिनीमिललाई उपलब्ध गराउँछन् तर तत्कालै त्यसको मूल्य पाउँदैनन्। उखु किसानहरूको कारोबार उधारोमा हुने गर्दछ। त्यो उधारो किसानहरूले वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन्। जसरी क्रसरमा उखु पेलिन्छ, त्यसरी नै आप्mनो उत्पादनको भुक्तानी पाउन किसानहरू पनि पेलिन्छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। उखुबाली लगाउनमा पनि समस्या, त्यसको नियमित हेरचाह गर्नुपर्ने, चिनीमिलको अनुमतिविना खेतबाट उखुबाहिर पनि ल्याउन नसकिने र येनकेन प्रकरेण चिनीमिलसम्म पु¥याइदिए पनि त्यसको भुक्तानी लिन फलामको च्युरा चपाउनु साबित भइरहेको छ। प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका नेता एवं प्रमुख कार्यकर्ताहरू मिलमालिकप्रति वफादार रहेका कारण पनि उखु किसानको समस्या समाधान भइरहेको छैन। उखु किसानहरू त्यही उखुबाट जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ, समयमैं मूल्य नपाएपछि उनीहरू आर्थिक सङ्कटमा पर्दछन्। उखु किसानका समस्या नयाँ होइन, धेरै वर्षअघिदेखि
नेपालको सार्वभौम र आर्थिक विकास
विश्वराज अधिकारी नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा विषय राजनीतिभन्दा बढी आर्थिक विकाससँग गाँसिएको छ। अर्थात् हामीले जुन मात्रामा आर्थिक विकास गर्दै जान्छौं, सोही अनुसार स्वतन्त्र भएर राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने हाम्रो क्षमतावृद्धि भएर जान्छ। धेरैलाई यो कुरा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ तर यो यथार्थ हो। यो कुरा पुष्टि गर्ने अनेक आधारहरू छन्। पहिलो आधारको रूपमा एक सानो राष्ट्र इजरायललाई लिन सकिन्छ। चारैतिरबाट शत्रु देशहरूले घेरिएर रहेको इजरायलले आप्mनो सार्वभौमसत्ताको रक्षा केवल आपूm आर्थिकरूपमा अति बलियो हुन सकेको कारणले गर्दा गर्न सकेको छ। इजरायल, भुटान वा नेपाल जस्तो आर्थिकरूपमा कमजोर भएको भए इजरायलको मानचित्र विश्वको नक्शाबाट उहिले नै हराइसकेको हुन्थ्यो । छिमेकीहरूले इजरायललाई टुक्रा पारेर आपूmहरूबीच बाँडिसकेका हुन्थे। इरानले अहिले पनि इजरायललाई एक राष्ट्रको रूपमा मान्दैन र इजरायल भन्ने देश नै छैन, भन्छ। सिरिया, सुडान, इरान, इराक, यमन, लिबिया, अल्जेरिया, बङ्गलादेश, ब्रुनाई, कुवेत, लेबनान, मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्सले इजरायलको पासपोर्ट हुनेहरूलाई आप्